Gịnị Bụ Mbilite n’Ọnwụ? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Batak (Toba) Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Georgian German German Sign Language Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabuverdianu Kannada Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Maltese Mam Mapudungun Maya Mingrelian Myanmar Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi (Shahmukhi) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Xhosa Zulu
Na Baịbụl, okwu Grik a sụgharịrị “mbilite n’ọnwụ” bụ a·naʹsta·sis. Okwu Grik a pụtara “ibili” ma ọ bụ “iguzoro ọtọ ọzọ.” N’ihi ya, mbilite n’ọnwụ pụtara ime ka mmadụ si n’ọnwụ bilie ma ọ bụ isi n’ọnwụ kpọlite mmadụ, ya amalitekwa ịdị ndụ otú ọ dịbu.​—1 Ndị Kọrịnt 15:12, 13.
N’agbanyeghị na okwu bụ́ “mbilite n’ọnwụ” adịghị n’Akwụkwọ Nsọ Hibru, nke ọtụtụ ndị na-akpọ Agba Ochie, ihe ndị ọzọ e kwuru na ya gosiri na a ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ. Dị ka ihe atụ, Chineke si n’ọnụ Hosia onye amụma kwe nkwa, sị: “M ga-agbapụta ha n’aka Shiol [ya bụ, Ili]; m ga-agbapụta ha n’aka ọnwụ.”​—Hosia 13:14; Job 14:13-​15; Aịzaya 26:19; Daniel 12:​2, 13.
Ebee ka ndị a ga-akpọlite n’ọnwụ ga-anọ? Ụfọdụ n’ime ndị a ga-akpọlite n’ọnwụ ga-aga eluigwe soro Kraịst chịwa. (2 Ndị Kọrịnt 5:1; Mkpughe 5:​9, 10) Baịbụl kwuru na mbilite n’ọnwụ nke a bụ “mbilite n’ọnwụ mbụ” ma ọ bụ “mbilite n’ọnwụ bu ụzọ.” Okwu abụọ a gosiri na a ga-enwe mbilite n’ọnwụ ọzọ. (Mkpughe 20:6; Ndị Filipaị 3:​11) Mbilite n’ọnwụ ọzọ a ga-abụ maka ndị ga-ebi n’ụwa. Ọ bụ n’ụwa a ka ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ a ga-akpọlite ga-anọ.​—Abụ Ọma 37:29.
Olee otú a ga-esi akpọlite ndị mmadụ n’ọnwụ? Chineke nyere Jizọs ike ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ. (Jọn 11:25) Jizọs ga-eme ka “ndị niile nọ n’ili ncheta” sí n’ọnwụ bilie. Onye nke ọ bụla n’ime ha ga-abụ onye ọ bụbu tupu ya anwụọ, nwee àgwà ndị e ji mara ya, marakwa ihe niile ọ mabụ. (Jọn 5:​28, 29) Ndị a ga-akpọlite n’ọnwụ ka ha dịrị ndụ n’eluigwe ga-enwe ahụ́ mmụọ, ma ndị a ga-akpọlite n’ọnwụ ka ha dịrị ndụ n’ụwa ga-enwe ahụ́ mmadụ, ahụ́ ga-agbasikwa ha ike.​—Aịzaya 33:24; 35:​5, 6; 1 Ndị Kọrịnt 15:42-​44, 50.
Ole ndị ka a ga-akpọlite n’ọnwụ? Baịbụl kwuru na a “gaje inwe mbilite n’ọnwụ nke ma ndị ezi omume ma ndị ajọ omume.” (Ọrụ Ndịozi 24:15) Ndị ezi omume a bụ ndị ji obi ha niile fee Chineke, dị ka Noa, Sera, na Ebreham. (Jenesis 6:9; Ndị Hibru 11:11; Jems 2:​21) Ndị ajọ omume bụ ndị na-emeghị uche Chineke maka na a kụzighịrị ha ihe Chineke chọrọ ka ha mee.
Ma, a gaghị akpọlite ndị ime ihe ọjọọ riri ahụ́ nke na ha agaghị echegharili. Ọ bụrụ na ndị ajọ omume dị́ otú a anwụọ, ha anwụọla ọnwụ ebighị ebi. Olileanya mbilite n’ọnwụ adịkwaraghị ha.​—Matiu 23:33; Ndị Hibru 10:26, 27.
Olee mgbe a ga-akpọlite ndị mmadụ n’ọnwụ? Baịbụl buru amụma na ọ bụ n’oge ọnụnọ Kraịst, nke malitere n’afọ 1914, ka a ga-amalite ịkpọlite ndị mmadụ n’ọnwụ ka ha dịrị ndụ n’eluigwe. (1 Ndị Kọrịnt 15:21-​23) Ọ bụ mgbe Jizọs Kraịst ga-achị ụwa otu puku afọ, ya bụ, mgbe a ga-eme ka ụwa ghọọ paradaịs, ka a ga-akpọlite ndị mmadụ n’ọnwụ ka ha dịrị ndụ n’ụwa.​— Luk 23:43; Mkpughe 20:​6, 12, 13.
Gịnị mere anyị ji kwesị ikweta na a ga-akpọlite ndị mmadụ n’ọnwụ? Baịbụl kọrọ banyere mmadụ itoolu a kpọlitere n’ọnwụ. Ndị mmadụ hụkwara mgbe a kpọlitere ha. (1 Ndị Eze 17:17-​24; 2 Ndị Eze 4:​32-​37; 13:20, 21; Luk 7:​11-​17; 8:​40-​56; Jọn 11:38-​44; Ọrụ Ndịozi 9:​36-​42; Ọrụ Ndịozi 20:​7-​12; 1 Ndị Kọrịnt 15:​3-6) Mbilite n’ọnwụ kacha pụọ iche bụ nke Lazarọs. O ruola ụbọchị anọ ọ nwụrụ tupu Jizọs akpọlite ya. Ìgwè mmadụ nọkwa ya mgbe Jizọs kpọlitere ya n’ọnwụ. (Jọn 11:39, 42) Ndị iro Jizọs enwedịghị ọnụ ha ga-eji ekwu na a kpọliteghị Lazarọs n’ọnwụ. Ọ bụ ya mere ha ji kpaa nkata otú ha ga-esi egbu ma Jizọs ma Lazarọs.​—Jọn 11:47, 53; 12:​9-​11.
Baịbụl kwuru na Chineke nwere ikike ọ ga-eji akpọlite ndị nwụrụ anwụ, ọ chọkwara ịkpọlite ha. Ọ na-echeta ihe niile gbasara onye ọ bụla ọ ga-akpọlite n’ọnwụ, o nweghịkwa ihe ọ na-enweghị ike ime. (Job 37:23; Matiu 10:30; Luk 20:37, 38) Chineke ga-akpọliteli ndị nwụrụ anwụ, ọ chọkwara ịkpọlite ha. Mgbe Baịbụl na-ekwu banyere mbilite n’ọnwụ, o kwuru na ‘agụụ ọrụ aka Chineke ga-agụsi ya ike.’​—Job 14:15.
Ihe na-abụghị eziokwu ndị mmadụ na-ekwu banyere mbilite n’ọnwụ
Ụgha: Mbilite n’ọnwụ bụ mkpụrụ obi na anụ ahụ́ ịbịakọta ọnụ.
Eziokwu: Baịbụl na-akụzi na mkpụrụ obi bụ mmadụ n’onwe ya, ọ bụghị ihe na-esi n’ahụ́ mmadụ pụọ mgbe onye ahụ nwụrụ. (Jenesis 2:7; Ezikiel 18:4) A kpọlite mmadụ n’ọnwụ, a naghị eweta mkpụrụ obi ya tinyeghachi ya n’ahụ́ ya; kama a na-ekegharị onye ahụ, ya abụrụ mkpụrụ obi dị́ ndụ.
Ụgha: A ga-akpọlite ụfọdụ ndị n’ọnwụ, bibiekwa ha ozugbo a kpọlitechara ha.
Eziokwu: Baịbụl kwuru na “ndị mere ajọ omume ga-enweta mbilite n’ọnwụ nke ikpe.” (Jọn 5:​29) Ma, ọ bụ ihe ha mere mgbe a kpọlitechara ha ka a ga-eji kpee ha ikpe, ọ bụghị ihe ha mere tupu ha anwụọ. Jizọs kwuru, sị: “Ndị nwụrụ anwụ ga-anụ olu Ọkpara Chineke, ndị ṅakwara ntị ga-adị ndụ.” (Jọn 5:​25) A ga-ede aha ndị ‘ṅara ntị’ ma ọ bụ ndị rubere isi n’ihe ha mụtara mgbe a kpọlitechara ha n’ọnwụ ‘n’akwụkwọ mpịakọta nke ndụ.’​—Mkpughe 20:12, 13.
Ugha: Ọ bu ahụ́ mmadụ nwe tupu ya anwụọ ka ọ ga-enwekwa ma a kpọlite ya n’ọnwụ.
Eziokwu: Mmadụ nwụọ, ahụ́ ya ga-ere, gbarie ma ghọọ ájá.—Ekliziastis 3:​19, 20.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Bụ Mbilite n’Ọnwụ?
ijwbq isiokwu 77
Olee Ndị E Dere Aha Ha ‘n’Akwụkwọ nke Ndụ’?